Global Voices teny Malagasy » Nahoana Ireo Tanora Any Koreo Avaratra No Sahy Manao Pataloha “Jeans” Manara-batana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Oktobra 2015 17:24 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Danbi, 24 taona, mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra, mpanao varotra antsokosoko tany amin'ireo tsenan'ny varo-maizina tao Korea Avaratra. Eto, entiny mitety ny tsenan'i Korea Atsimo isika, izay mampahatsiahy azy ireo tsenan'i Korea Avaratra. Sary nalain'i: Heidi Shin. Nahazo fahazoandàlan'ny PRI
Nivoaka tao amin'ny PRI.org  ny 29 Septambra 2015 ny voalohany tamin'ito lahatsoratra sy tatitra amin'ny radio nataon'i Heidi Shin  ho an'ny The World  ito, ary naverina nalefa eto araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Te-hanao jeans manara-batana ve ianao raha toa ka tsy ara-dalàna izy ireny? Raha ny hita, eny no valiny, farafarakeliny ho an'ny tovovavy Koreana Tavaratra iray.
Nandehandeha nitety ny tsena iray tao Korea Atsimo izaho sy Danbi, raha nijanona nankafy nijery pataloha manara-batana iray izy. “tena tian'ireo tovovavy ery izao ny hitndra an'ireo hody any an-trano!” hoy izy. Amin'ilay hoe any an-trano, te-hiteny tanàna lavitra iray izy, Korea Avaratra.
Nahifikifiny ny volony, ary nihomehy tamin'ny fony izy, sahala amin'ny hoe te-haka ilay haingom-bolony mamiratra izy. Tsaroany hoe, “Samy te-handefa ny rantsan-tànana ao anaty volo toy izao daholo izahay rehetra. Sahala amin'ny hitantsika ao amin'ny fandaharan'ny fahitalavitra Koreana Tatsimo. Kanefa tsy afaka izahay. Satria tsy manana ‘shampoo’ fanasana loha ampy tsara izahay any Korea Avaratra, ka hihitsoka eo fotsiny ireo rantsan-tànanao!”
24 taona i Danbi, mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra, izay mandoko sarinà fitondrana feno jadona izay samihafa tanteraka amin'ny fahitantsika mahazatra, fa kosa zavatra tohanan'ireo mpamadika sy ireo miara-miasa aminà Koreana Tavaratra. Eny, anjakan'ireo fanitsakitsahana zon'olombelona sy fahantrana lalina ilay firenena. Fa i Danbi, izay naka anarana vaovao taorian'ny nitsoahany, avy any amin'ny tanàna manakaiky ny sisintanin'i Shina — izay toa nahagaga lasa feno lavadavaka, ary lehibe tao amin'io firenena izay hita fa mikatona misy varavaran-kely itazanana ny tany ivelany io izy.
Nilaza izy fa niantsena tany amin'ireo tsena varo-maizina sy nividy ireo entana avy any ivelany naiditra antsokosoko ary nijery fandaharana Amerikana sy Koreana Tatsimo tamin'ny fahitalavitra , tamin'ny alalan'ny clé USB nampidirina antsokosoko, hatramin'ny fahazazàny. Ka fony izy niditra tamin'ny lisea, nilaza ny zavatra nianarany tany an-tsekoly i Danbi — hoe tsy azo itokisana ireo Amerikana ary mahanttra ny Koreana Tatsimo — tsy nino ny fahamarinan'izany izy.
Polisy mitsidika ny tsena Koreana Tatsimo. Nilaza i Danbi fa afaka hita any amin'ireo tsenan'i Korea Avaratra ny ankamaroan'ireo entana amidy eto. Sary nalain'i: Heidi Shin. Nahazoana fahazoandàlana avy tamin'ny PRI
Noho izany, nanomboka ningitrika izy ary nanomboka nanao varotra antsokosoko tany amin'ireo sisintany feno lavadavaka ankehitriny. Nivarotra holatra avy any Korea Avaratra amin'ireo mpivarotra Shinoa izy, ary nitondra kesikanà vary, lafarinina sy entana hafa niverina.
Ankehitriny, mety sahisahy kokoa sy manana saina tia manao zavatra noho ireo tanora Koreana Tavaratra i Danbi. Fa anisan'ilay taranaka Koreana Tavaratra izay ankizy nandritra ilay tsy fahampian-tsakafo nandravarava tao amin'ny firenena ny taona 90 izy. Noho izany, ireo tanora toa an'i Danbi, tsy niandry ireo mpanao didy jadon'ny firenena mba hanome zavatra, toy ny nataon'ireo ray aman-dreniny, sady tsy manaraka ireo fitsipiky ny governemantany.
Matoky tena sy manana fahavononana mihitsy aza izy, fa miakatra tampoka ny feony rehefa anontaniana momba ny fomba fitantanan'ny firenena izy. “Hitanay ireo kibo-beny, raha toa ka noana kosa ireo sasany aminay. Fantatray fa tsy rariny izany,” hoy izy maimaina, somary nanana fomba fiteny Koreana Tavaratra teo am-pitenenana ny heviny.
Danbi, mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra ao an-tranony, mikarakara vatana mialohan'ny hivoahana. Any Korea Avaratra, mihaodihaody eny amin'ny arabe ireo mpiandry tanora, mba hitoroka ireo tanora izay tsy manaraka ny fitsipiky ny fomba fiakanjoana eo amin'ny firenena. Ny Jeans, izay malaza any Korea Atsimo, dia raisina ho endriky ny fanjakazakàn'ny Amerikana any Avaratra. Sary nalain'i: Heidi Shin. Nahazoana fahazoandàlan'ny PRI
Tena gaga aho amin'ny fomba fitenin'i Danbi toy ny an'ireo tanora Amerikana . Mitsikera ireo manampahefana izy ary mirehareha amin'ny tsy fanarahana ny fenitry ny fomba fiakanjo an'ny firenena amin'ny maha-tanora Koreana Tavaratra. Nolazainy tamiko ny fotoana nisamboran'ireo mpitoroka ny tanora azy noho ny niakanjoany akanjo manara-batana, akanjo izay avy tamin'ny tsena antsokosoko avy any Atsimo.
“Manipika tsipika eo amin'ny làlana izy ireo, ary asainy mitsangana eo ianao, ary izy ireo mandrovitra ny akanjonao moa ny olona mandalo. Mba hanao anao ho ohatra,” hoy izy manazava. Endriky ny fanjakazakan'ny Amerikana no nijerena ny jeans, ary goahan'ireo mpitoroka ny jeans anaovan'ireo ankizivavy tratra manao ireny mba tsy ho azo anaovana intsony avy eo. Voatapaka eo noho eo ihany koa ny volo izay lava loatra, hoy izy.
Nampian'i Danbi hoe raha tratra in-dimy na in-enina ianao, alefa manao asa an-terivozona ianao, raha tsy hoe manana olom-patatra sy fahafahana manao tsolotra angaha.
“Any Korea Avaratra, maro ireo zavatra afaka ahitàna vahaolana rehefa manam-bola ampy tsara ianao ankehitriny,” hoy izy nanipika. “Miankina amin'ireo tsena maizina izahay mba ho enti-miaina. Ny asa rehetra, mampiditra entana antsokosoko, mivarotra entana, manao izay hanampenana ny mason'ireo mpiasam-panjakana, vola daholo no anaovana izany rehetra izany.”
Danbi, 24 taona, mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra, mijery sary amin'ny findainy. Tsy manana fifandraisana amin'ny fianakaviany any an-tanindrazany izy, hoy izy. Fa ireo Koreana Tavaratra sasany, manohy mifanerasera amin'ireo fianakaviany any Avaratra, amin'ny alalan'ny entana voafono na finday Shinoa ampidirina antsokosoko. Sary nalain'i: Heidi Shin. Nahazoana ny fahazoandàlan'ny PRI
Mbola miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny ankamaroan'ireo Koreana Tavaratra. Voafetra ho ora vitsy isanandro ny herinaratra, zara raha misy ihany koa ny sakafo sy ny rano madio, ary tena misy ny fandrahonana isanandro ho alefa any amin'ireo toerana fanaovana asa an-terivozona — na mety hoe sazy mafimafy kokoa noho izany aza. Fa hitan'i Danbi ny fahasamihafàna ateraky ny fahafahana mankany amin'ny tany ivelany.
Nampahatsiahiviny hoe “Nanana mpifanolo-bodirindrina manana fianakaviana tany Atsimo izahay, ary tampotampoka teo, nanomboka lasa nihatsaratsara kokoa izy ireo, hatry ny nandefasan'ny fianakaviany vola tany aminy. Nisy fotoana, nananihany mihitsy ny reniko hoe maninona moa ianao no tsy mitsoaka ary mandefa vola ho anay koa.”
Araka ny Fikambanana Tsy Miankina Amin'ny Fanjakana “Liberty” (Fahafahana) any Korea Avaratra, mandefa vola lalandava any Korea Avaratra isan-taona ireo mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra. Afaka mifandray amin'ireo fianakaviany matetika ihany koa ireo manana fahafahana amin'izany, amin'ny alalan'ireo entana voakajy alefany sy finday ampidirina antsokosoko.
Efatra taona izay i Danbi nonitsoaka tany Korea Atsimo — taorian'ny nahafantarany fa nanaovan'ny governemanta Koreana Tavaratra fanadihadiana izy, ary tsy afaka hanao kolikoly momba ny fandehanany ho any ivelany. Ankehitriny, manambady lehilahy Koreana Tatsimo izy, ary nilaza izy fa ny fiasàna tamin'ireo tsena maizina sy ny fianakaviany navelany tany no tena tsaroany ho banga aminy momba an'i Korea Avaratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/04/75261/
 Nivoaka tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2015-09-29/why-young-north-koreans-are-daring-wear-skinny-jeans